Ogaden News Agency (ONA) – UAE oo Cambaareeyay Lacagtoodii Muqdisho Lagu Qabtay.
UAE oo Cambaareeyay Lacagtoodii Muqdisho Lagu Qabtay.
Posted by ONA Admin	/ April 12, 2018
Imaaraadka Carabta (UAE) ayaa si adag u cambaareyey sida loola dhaqmay Saraakiisha dalkooda ka socday ee siday lacagtii loogu talo galay ciidamada Militariga dowlada Soomaaliya.
Qoraal kasoo baxay Wasaarada Arrimaha Dibada ee UAE ayaa lagu sheegay in diyaaradii siday lacagta gaaraysa $9.6 milyan oo dollar oo loogu talo galay ciidamada militariga iyo Tababarayaasha UAE ay si anshax xumo ah u qabteen saraakiisha Soomaalida ee ku sugan Madaarka Adan Cade International Airport.
Falkii ka dhacay Axadii lasoo dhaafay Madaarka Muqdisho ayaa ka hor imaanaya heshiiskii dhexmaray labada dowladood ee la saxiixay November 2014, ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay UAE. Dowlada UAE ayaa sheegtay in saraakiisha Lacagta u waday dowlada Somaliya si xun loola dhaqmay oo qaarkood hub loogu hanjabay, arrintaasi oo ka horimaaneysa sharuucda caalamiga ah iyo xeerka Diblumaasiyada ee Dunnida ku dhaqanto.
UAE ayaa horey tababaro u siin jiray ciidamada Danab ee militariga Soomaaliya, ayaa dhawaan sheegay inay dib u bilaabi doonaan dhaqaalihii ay ku bixin jireen tababarada ciidamada Soomaaliya. Waxay sidoo kale dowlada UAE tababar siisaa ciidamada Badda ee Puntland, iyadoo sheegtay inay dhawaan bilaabi doonto tababarada ciidamada Somaliland, kadib markii ay labada-dhinac wada gaareen heshiiska dhismaha saldhiga militari ee Berbera.